Ask Tete Archives - Nhau Dzevakuru
Ndoita Sei nhai kuti ndinakirwe nemurume wangu?
Tete Vee - June 24, 2021
Max - August 15, 2019
5 Different Types of Women pakusvirana muZimbabwe
5 Different Types of Women pakusvirana muZimbabwe. Thanks to Masasi eHarare WhatsApp Group we were able to compile this list… Vanoda Mboro Hombe: Ava vakadzi vanozviti vanonakirwa nemboro hombe chete and usually ava vane mapeche...
Max - January 20, 2019
Murume anodawo kuti iwe mukadzi upote uchimbomukwirawo kuda kusvirwa
Varume vanodawo kuti iwe mukadzi upote uchimbomukwirawo kana kumuudza kuti ndirikuda kuiswa! Kana murume akaneta musana ndoitawo sei? Kuneta musana zvinoreva kuti murume haasi kugona basa pabonde. Anonetsa kukwezva. Anoona mukadzi wake semunhu akangomirira...
Max - January 3, 2019
Zvokudya zvokupa varume kupi vagadzire hurume hwakakora!
Vamwe venyu vanongochema chema kuti sei murume asingafarire bonde mumba make. Asi iwe uriwe usinganzwisisi kuti murume anopihwa zvekudya zvakaita sei.Kugeza ndiko hako asi kana murume asina zemo anongokufemedza obva arara. Zvokudya izvi zvinomugarisa...
Max - December 1, 2018
Ndiri kuchata muna December but ndirikutya kusvirwa
Pakusvirana mboro yemurume inopinda yese here kana kuti chidimbu chete? Ndiri kuchata muna December but ndirikutya kusvirwa asi hapana mukana wekusaita. Mboro yemurume ine saizi unobva pa 12 cm kusvika pa 20cm kureba zvichibva nekuti...
Max - November 20, 2018
Ndingaita sei kuti murume wangu anakirwe pabonde?
Ndingaita sei kuti murume wangu anakirwe pabonde? Murume umwe neumwe ane zvaanofarira pakuisana kwenyu. mukadzi umwe neumwe ane zvaanofarirawo iwe pane zvaunofarira zvisinei nekuisana kwevamwe vakadzi nevarume vavo. Kuti unzwisise zvinonakira murume wako bvunza murume wako...
Kana murume / mukadzi asingaguti pabonde, mhosva inani?
Kana murume or mukadzi asingaguti pabonde, mhosva inani uye zvinogadzirika here? Kana usingaguti pakuisana, mhosva inokanisa kuva newe kana kuti neumwe wako. Kana usina kuudza umwe wako kuti hausi kuguta uye kuti chii chaangakubatsira nacho...
Max - November 13, 2018
Zvinokwanisika here kuti ndirambe ndichikoira mukadzi kwenguva refu?
Tete ndaita mubvunzo, ndinoda kukoira mukadzi wangu nguva refu zvinokwanisika here uye ndinoita sei? Chekutanga, ndinotenda chose kuti wafungawo kunakira umwe wako. Kuvarume vese vane vakadzi, dai muchimbofungawo kuwedzera nguva yauri mukati memukadzi wako. Zvinofadza...
Help ndakarova nyoro munhu asiriye
Help ndakarova nyoro munhu asiriye. Ndati ndimbonzwawo vamwe nekuti as I write this story ndanetsekana pamoyo. I just moved from Masvingo to Harare and in my hood ndakasangana naSekai. Baby rine macurves ekuti kana...
Tete Vee - November 9, 2018